Qof waliba qaab dadban waxa uu kuu sheegayaa ama ka dareemeysaa “Waxaan Raadineynaa Nolol Wanaagsan” laakiin………………..!! | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Qof waliba qaab dadban waxa uu kuu sheegayaa ama ka dareemeysaa “Waxaan Raadineynaa Nolol Wanaagsan” laakiin………………..!!
Qof waliba qaab dadban waxa uu kuu sheegayaa ama ka dareemeysaa “Waxaan Raadineynaa Nolol Wanaagsan” laakiin………………..!!
Dec 03, 2016ARRIMAHA BULSHADA, MAQAALO, WARAR
Shaqsi kasta oo dunida guudkeeda saaran waxa uu xusul duub ugu jira sidii uu ugu noolaaan lahaa Nolol Wanaagsan, ka soo qaad Soomaaalida Wiil, Gabar, Oday, Haween, Garab-rarato, Macalin, Proffisoor, Injineer, Kornayl, Dhakhtar, iyo Weriye ku jira halgan hadaad waydiiso halgankiisa waxa uu ku leeyahay waxaan baadi goob ugu jiraa Nolol Wanaagsan. Hadaba maxay tahay nolosha wanaagsani? Nolosha wanagsan, qaar baa Soomalida rumaysan in ay tahay in la helo Lacag fara badan, qaar kale ayaa aaminsan in nolosha wanaagsani tahay in madax la noqdo sida Madaxwayne, Wasiir, Xildhibaan, amaba madax laga noqdo Hay’ad iyo wixii la hal maala, Qaar baa qaba in nolosha wanaagsani tahay iyadoo la dhisto daaro dhaadheer, halka kuwo kalena rumaysan yihiin in nolosha wanaagsani ay tahay iyadoo lagu noolaado mid ka mid ah wadamada hore u maray sida Maraykanka iyo Yurub
Si loo helo ama loo gaaro Nolol Wanaagsan (Better Life) waxaa lagaaga baahan yahay inaad buuxiso sharuuhan . 1- inaad qabato ama hesho cilmi ku Anfaca, hadaad Wax barato oo aanu ku anficin waad ka maran tahay Cilmigii aad baratay. 2- Irsaaqad Xalaal ah, hadaad Irsaaqad badan hesho oo aanay xalaal ahayn waad khasaartay. 3- in Shaqada aad qabato ama camalka aad sameyso Ilaahey kaa aqbalo, haadaad shaqo badan qabato oo Cibaado ah oo aan Ilaahey kaa aqbalin waxaad samaysay Camal aan khayr lahayn. Markaan sidaas leeyahay Nebigeenii Muxamed NNKHA ayaa ku ducaysan jirey Cilmi Anfaca, Irsaaqad Xalaal ah iyo in Ilaahay Camalka ka Aqbalo.
Dhinaca kale waxaa xaqiiq ah in Sacaado ama Liibaan oo dhan ay ku idlaatay qofkii Ilaahey Muslim ka dhigay, qaar ka mid ah dhalinteeneeni Maanta waxay leeyihiin maxaan Muslinimada ku haysanaa? Subxaanalaah! Ilaah ayaa xumaan ka nazahan, waxay la mid yihiin kuwo in dha la’ oo Qalbiga ka daboolan, Mudane/Marwo hadaad Muslim tahay, Irsaaqadaadana Ilaahey Balan qaaday intii aadan dhalan maxaa kaa maqan?
Previous PostMadaxtooyada Soomaaliya oo ka jawaabtay hadalkii Cumar Cabdirashiid ee ahaa in Jubland putland, saaxiibadooda Itoobiya iyo Imaaraadka ay sameeystaan is badal hogaamiye siyaasadeed!! Next PostWar Deg Deg Ah : Ciidamo katirsan Maleeshiyaadka Maamulka Putland ayaa goordhaw la wareegay Xarumo muhiim ah oo kuyaala waqooyga Gaalkacyo!!